Iindaba - "Uvavanyo lwe-antigen olukhawulezileyo lwe-19 (i-Colloidal Gold)" yi-JBT ifumana isiqinisekiso kwi-PEI yaseJamani kunye nesiqinisekiso sogunyaziso lokuthumela ngaphandle ngempumelelo
"Uvavanyo lwe-antigen olukhawulezayo lwe-COVID-19 (i-Colloidal Gold)" ngu-JBT fumana ubungqina kwi-PEI yaseJamani kunye nesiqinisekiso sokugunyaziswa kwamanye amazwe ngempumelelo
01. I-COVID-19 Antigen Schnelltest (Colloidal Gold) ephuhliswe nguJoinstar Biomedical Technology ifumene ubungqina bokusebenza kwiziko likaPaul Ehrlich. Ngokudibeneyo no-Abbott, Roche, SD, BD, Nokia LumiraDX, kunye nezinye iinkampani ezaziwa kwilizwe liphela, iJoinstar Biomedical Technology iye yaba ngomnye wabenzi beantigen abambalwa abavunyiweyo yiPEI kwibhetshi yokuqala jikelele.
"UPaul-ehrlich-Instutut" (PEI) umele iziko lomanyano laseJamani lezitofu zokugonya kunye neBiomedicine, elinoxanduva lweziko lophando lwamayeza kunye nearhente yolawulo. I-PEI ikwaligunya eliphezulu lomanyano elinika ingxelo kwiSebe lezeMpilo likaRhulumente, iziko elisebenzisanayo lokuqinisekisa umgangatho weemveliso zegazi ze-WHO kunye nezixhobo zokuxilonga i-vitro. Ibizwa ngegama lomlawuli wayo osungula, ugqirha wezidlele kunye nowathweswa imbasa kaNobel, uPaul Ehrlich.
02. Malunga novavanyo olukhawulezayo lwe-antigen
Kutheni sifuna uvavanyo olukhawulezayo lwe-antigen?
I-Antigen ibhekisa kwinto enokuvelisa izilwa-buhlungu, yiyo nayiphi na into enokubangela ukuphendula komzimba. Uvavanyo lwe-antigen lunokusetyenziswa kwinqanaba lokuqala lesi sifo (emva kokuqala kweempawu ngaphakathi kweentsuku eziyi-1-5 okanye ngexesha lokufukama) ukufumana iziphumo ezincumisayo. Indlela yokufumanisa i-antigen ilunge ngakumbi kuphando lwexesha elinolwazelelo lwamatyala akrokrelwayo osulelo olukhulu lwe-coronavirus kwaye isebenza kakhulu kwiindawo ezinesifo esigqamileyo. Ngokwemeko enzima kwaye entsonkothileyo, i-WHO, FIND kunye neminye imibutho yamazwe aphesheya ikhuthaza ukufunyanwa kwe-Antigen njengeendlela ezifanelekileyo.
Kubandakanya i-UK, iFrance, iSlovakia, iSlovenia, iGeorgia, kunye namanye amazwe amaninzi sele eqalisile ukuthenga kunye nokwenza uvavanyo lwe-Antigen Rapid kwiindawo ezinkulu zokuhlanganisana kwabantu.
Uvavanyo lwe-COVID-19 Antigen Rapid (Colloidal Gold)
I-nasopharyngeal swab njengesampulu
Ubuntununtunu obuphezulu kunye nokucaciswa
Ithuba elifutshane lewindows, fumana izifo kwinqanaba lokuqala kunye nexesha lokufukama, eluncedo ekuhlolweni kwangoko. Ukuxilongwa kwangoko kuzisa unyango olungcono.
Isebenza kwiimeko ezahlukeneyo: amaziko abekiweyo (anjengezibhedlele); ukuqala kwakhona komsebenzi kunye nesikolo, ukubeka esweni okuqhubekayo kweemeko ezintsha ze-coronary, njl.
Indlela yenyathelo elinye, kulula ukuyisebenzisa, ukunciphisa ukubonwa okungachazwanga kunye nokuchongwa kwempazamo okubangelwa ziimpazamo zokusebenza;
Nikezela ngeseti epheleleyo yezenzi kunye nezinto ezisetyenziswayo ezifunekayo kuvavanyo; akukho zixhobo zifunekayo;
Ukusebenza ngokukhawuleza, iziphumo kwimizuzu eyi-10-15;
Ubushushu bokugcina: 2 ~ 30 ℃, akukho sidingo sothutho olubandayo;
Ukukhetha okukhethiweyo: i-25 servings / ibhokisi, i-1 yokukhonza / ibhokisi;
Iindlela ezininzi zentsebenziswano, zamkela i-OEM / i-ODM
04. Isiqinisekiso semfundo:
Isatifikethi se-CE, isigunyaziso sokuthumela ngaphandle se-Ofisi yoMphathiswa Wezorhwebo
Uluhlu lwe-EU coronavirus yesisombululo sokuvavanywa kwesisombululo, esidweliswe yi-WHO-FIND Innovation Foundation, kwaye lwaphumelela uvavanyo lwe-PEI yaseJamani,
Isatifikethi sobhaliso eJamani nase-Itali